दाङको मुर्कुटीमा सिटिजन्सले शुरु गर्‍यो शाखारहीत बैंकिङ सेवा
काठमाडौं : सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले बैंकले दाङ जिल्लाको बंगलाचुली गाउँपालिका, मुर्कुटीमा शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा प्रारम्भ गरेको छ । सो स्थानमा सेवा संचालनका लागि स्थानीय व्यवसायी होतीदेवि वलीलाई व्यवसायीक प्रतिनिधि नियुक्त गरेको बैंकले जनाएको छ ।
यस शाखा रहित बैंकिङ्गबाट निक्षेप संकलन, रकम भुक्तानी, कोष स्थानान्तरण, मोबाइल फोनको बिल भुक्तानी, उपयोगी सेवाहरुको रकम भुक्तानी लगायत बैंकले प्रदान गर्ने अन्य सेवाहरु उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । सेवाबाट ग्रामिण क्षेत्रमा बैंक प्रति उल्लेखनिय विश्वास एंव बैंकिङ्ग सभ्यताको बिस्तार हुने अपेक्षा बैंकले लिएको छ ।
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशैभरी १७४ वटा शाखा, १२३ वटा ए.टि.एम. र ११३ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट करिव १२ लाख ५० हजार ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।
कोका–कोलाले गर्‍यो कर्मचारी लक्षित अन–ग्राउन्ड एक्टिभेसन
काठमाडौं : लोकप्रिय पेय पदार्थ कोका–कोलाले कोभिड महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीहरुप्रति विशेष रुपमा समर्पित अन–ग्राउन्ड एक्टिभेसन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । आफ्नो नजिकको मान्छेहरु र विशेष गरी महामारीको समयमा अनवरत सेवामा खटिने कर्मचारीहरुप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको कोकाकोलाले जनाएको छ । एक्टिभेसन कार्यक्रम कोका–कोलाको सन २०२१ को दशैँ क्याम्पेन अन्तर्गत धन्यवाद शीर्षकको एक हिस्सा थियो ।
उक्त अन–ग्राउन्ड एक्टिभेसन कोका–कोलाले वि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान), स्टार अस्पताल (काठमाडौं) र ह्याम्स अस्पताल (काठमाडौं) लगायत नेपालको प्रमुख ५ कोभिड अस्पतालहरुसँग आबद्ध भएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यस्तै गरी एम्बुलेन्स सेवाप्रदायक“नेपालएम्बुलेन्स सेवा”, “वुमन फर ह्युमन राइट्स” र क्रिएशनइनको सन्जालअन्तर्गत फोहोर व्यवस्थापनमा संलग्न कामदारहरु लगायत महामारीको समयमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने अन्य १३ गैर–सरकारी संस्थाहरुसँग पनि कोका–कोलाले सहकार्य गरेको गरेको जनाएको छ । क्याम्पेनको दौरानमा कोका–कोलाले अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने सेवाप्रदायकहरुलाई उपहारको रुपमा उनीहरुको नाम छापिएको कोक बोटल र कोका–कोला कन्टोर ग्लास भएको पर्सनलाइज्ड धन्यवाद गिफ्ट बक्स समेत प्रदान गरेको छ ।
अभियानको बारेमा बोल्दै कोका–कोला नेपालको कन्ट्री डाइरेक्टर श्री आदर्श अवस्थीज्युले भने, ‘यो वर्षको दशैँमा हामीले सम्पूर्ण फ्रन्टलाइन हिरोहरुलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्ने एउटा सानो प्रयास स्वरुप “धन्यवाद अन–ग्राउन्ड एक्टिभेसन” सन्चालनग¥यौँ । यो महामारीको समयमा पनि हामी र हाम्रो समुदायको सुरक्षाको लागि वहाँँहरुले गर्नुभएको अनवरत परिश्रमलाई हामी सम्मान गर्दछौं । समुदाय प्रतिवहाँँहरुको निःस्वार्थ प्रतिबद्धतालाई हामी फेरी पनि सलाम गर्दछौँ ।’
करदाता सेवा कार्यालय तम्घासको उत्कृष्ट कर्मचारीको रुपमा घिमिरे सम्मानित
गुल्मी : करदाता सेवा कार्यालय तम्घासको उत्कृष्ट कर्मचारीको रुपमा सरिता अर्याल घिमिरे सम्मानित भएकी छन् । मंगलबार भएको दशौं रास्ट्रिय कर दिवस तथा कर सप्ताह कार्यक्रमको समापनको अवसरमा कार्यालयमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीको रुपमा घिमिरे सम्मानित भएकी हुन् । कार्यालयको कार्यसम्पादन मुल्यांकनको आधारमा घिमिरे सम्मानित भएको कार्यालय प्रमुख चिरञ्जीवी बस्यालले बताए ।
कार्यालयले कर सप्ताहलाई साताव्यापी रुपमा मनाइरहेको छ । पहिलो दिन कर सप्ताहको उद्घाटन र धेरै कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गरेको थियो । दोस्रो दिन सत्यवती खैरेनीमा करदाता शिक्षा कार्यक्रम र चौथो दिन जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय र विद्यालयलाई कर सम्बन्धि तालिम प्रदान गरेको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै कार्यालयले पाँचौ दिन रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीसँग कर शिक्षा सँग सम्बन्धित विविध कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो ।
भक्तपुर चेम्बरको अभिमुखीकरण, समूहमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने
भक्तपुर : भक्तपुर चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष न्हुछेरत्न मानन्धरले समूहमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । अबको व्यवसायीहरुले नयाँ व्यवसायीक संभावनाहरुका बारेमा खोजीनीति गरी लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अध्यक्ष मानन्धरले भक्तपुरमा आयोजना गरिएका अभिमुखिकरण कार्यक्रममा चेम्वरले आफ्ना सदस्यहरुबाट मात्रै नभई गैर सदस्य, सरकारी तथा स्थानीय निकायहरु र सामाजिक क्षेत्रबाट समेत चेम्बर प्रतिको अपेक्षामा वृद्धि भएको बताए । उनले व्यवसायीक समस्या र चुनौतीहरुसंग सामना गर्नेकाम चेम्बरले गर्दै आएको बताए ।
सरकारी तथा स्थानीय निकायहरुमा माग मात्र पेश गर्ने नभई वैकल्पिक उपायहरु समेत राय सुझावको रुपमा उपलब्ध गराउन चेम्बर सक्रिय रहेको अध्यक्ष मानन्धरले दाबी गरे । सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सचेत रहदै चेम्वरले विभिन्न सामाजिक गतिविधिहरुमा आवद्धता रहेको र रहने बताए । मंगलबार मध्यपुर थिमीको दुईपोखरीमा आँंखा शिविर सञ्चालन गर्न लागेकोले सबैलाई लाभ लिन उनको अनुरोध थियो । अभिमुखिकरणमा चेम्बरका सल्लाहकार र कार्यकारी अधिकृत लगाएतले धारणा राखेका थिए ।
विधुत प्राधिकरणलाई पत्रकारहरुको ध्यानाकर्षण पत्र
बाजुरा : बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीमा विद्युत अनियमितता भएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । बाजुराका पत्रकारहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरण काठमाडौंलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सोमबार बाजुरामा संचालित विभिन्न संचार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी समिर भण्डारीमार्फत प्राधिकरणलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । सरकारले देशभर उज्यालो कार्यक्रम संचालन गरेता पनि बाजुरेली जनताले भने अझै लोडसेडिङको मार खेप्न बाध्य भएका छन् ।
कुलमान घिसिङ जस्तो उज्यालो नेपालका नायक प्राधिकरणको प्रमुख पदमा रहँदा पनि सुदुरपश्चिम प्रदेशको दुर्गम, भौगोलिक विकटतामा रहेको हिमाली जिल्ला बाजुरामा प्राधिकरणको प्रशारण लाइन विस्तार नहुँदा समस्या हुने गरेको छ ।
पत्रकारहरुले बुझाएको ध्यानार्कषण पत्रमा अँध्यारोमा बस्न बाध्य बाजुरेली जनताले राज्यबाट के अपेक्षा गरेका होलान् ? भन्दै प्रश्न गरिएको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको बाजुरा साना जलविद्युत केन्द्र तीन वर्षमा ९३ लाख घाटा खाएपछि २०६६ सालमा नै त्रिवेणी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई लिजमा दिइएको थियो । हाल सो संस्थाले जेनतेन चलाइरहेको संस्थाका व्यवस्थापक दयाराम पण्डित बताउँछन् ।
यता विद्युत प्राधिकरको वितरण शाखा कार्यालय बसेको समेत करिब चार वर्ष पुग्न लागेको छ । तर सो कार्यालय भने टुलुटुलु मुखदर्शक बनेर हेरिरनु बाहेक अरु केही गरेको देखिएको छैन । यता मार्तडीमा विद्युत नियमित नहँुदा जिल्लाको पत्रकारिता क्षेत्र समेत निकै चपेटामा परेको छ ।
पत्रकारहरुले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीले ज्ञापन पत्र सम्बन्धित निकायमा पु¥याएर सम्बोधका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
महंगियो तरकारीको भाउ, केहि दिन स्थिर रहने
काठमाडौं : कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा तरकारीको भाउ आकासिएको छ । केहि महिना अगाडिको तुलनामा तरकारीको मुल्य सोचेको भन्दा अत्याधिक महंगो भएको व्यापारीहरु बताउँछन् । केहि तरकारी त चार सय प्रतिशतसम्म बढेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका वरिष्ठ बजार संचालक अधिकृत मनोज धिताल बताउँछन् ।
तरकारी बजार क्षेत्रभित्रका थोक तरकारी बिक्रेता सोनित कार्की चितवन लगायत बढी तरकारी उत्पादन हुने क्षेत्रबाट तरकारी नआएको कारण महंगो भएको बताउँछन् । पहिलेको वर्ष पनि महंगो थियो तर पहिलेको भन्दा यो वर्ष अलि महंगो भएको कार्की स्वीकार गर्दछन् । प्रायः तरकारी तराई लगायतका जिल्लाबाट आयात गरिन्छ । त्यहाँबाट आयात रोकिनासाथ पहाडतिरको तरकारी आयात गर्दा किसानलेनै महंगोमा बिक्री गर्ने भएकोले थोक बजारमा आइपुग्दा महंगोनै पर्न जाने भएकोले बजारभाउ बढेको व्यापारीहरु बताउँछन् ।
विशेष गरेर तितेकरेला, काउली, मुला, भन्टा, बोडि, घिरौँला, चिचिण्डो, भिण्डी, कुरिलो आदीको भाउ बढेको छ भने त्यसको तुलनामा अन्य तरकारीको भाउ त्यति नबढेपनि पसलमा मनपरी भाउमा बेचिरहेको पाइन्छ ।
थोक तरकारी गत वर्षको तुलनामा यसपटक केहि बढेको अधिकृत मनोज धिताल बताउँछन् । तर पोहरकै तुलनालाई हेर्ने हो भने केहि तरकारी दुई सय प्रतिशत भन्दा माथिनै बढेको पाइन्छ । यसरी भाउ बढ्नुका मुख्य कारण उत्पादनसँग जोडिएको हुनाले कृषकले राम्रो मुल्य लिइरहेको उनी बताउँछन् । यसको नियन्त्रणको लागी बजार व्यवस्थापनको केहि भूमिका नरहने बताउँछन् । बरु बजार भाउमा तोकिएको भन्दा बढीमा बिक्री वितरण गरेको खण्डमा कारवाही गर्न सकिने अधिकृत धिताल बताउँछन् ।
उनका अनुसार अहिले कृषकहरुको खेतमा धमाधम तरकारी फलिरहेको अवस्था भएको र त्यो तरकारी बजारमा नआएसम्म बजारभाउ स्थिर रहनेछ । जब माग भन्दा बढी उत्पादन हुन थाल्छ त्यसपछि बजारभाउ ओरालो लाग्ने गर्दछ । पहिलेको तुलनामा आयातमा दुई टन घटेको छ भने भारतबाट ४० प्रतिशत तरकारी आयात भइरहेको छ ।
१८ औं हस्तकला मेलामा आठ करोड बराबरको कारोबार, उद्यमीहरु उत्साहित
काठमाडौं : हस्तकला सम्बन्धि १८औं व्यापार मेलामा उद्यमीहरु उत्साहित भएका छन् । नेपाल हस्तकला महासंघद्धारा काठमाडौंको हायात होटलमा आयोजित तीनदिने मेलामा करिब आठ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको संयोजक रविन्द्र शाक्यले बताए ।
उक्त मेला आज समापन भएको छ । मेलामा एक लाखभन्दा बढी मानिसहरुले अवलोकन गरेको थियो । पहिलो दिन २३ हजार जनाले मेला अवलोकन गरेको थिए भने, दोस्रो दिन ५५ हजारले मेला अवलोकन गरेको आयोजकले जनाएको छ । दोस्रो दिन शनिबार परेकोले मेला अवलोकनकर्ताको व्यवस्थापन गर्न गा¥होे भएकोे शाक्यले बताए ।
महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भाइ शाक्यले निर्यात व्यापार, रोजगारी सिर्जनाका साथै देशको कला सस्कृतिको संरक्षण सम्वद्र्धनमा हस्तकलाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकोले हस्तकलालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
मेलाको १६ औं कला प्रतियोगितामा नेचुरल फाइवरतर्फ दाङकी सुनिता कुमारी चौधरी प्रथम भएकी छिन भने पुन महर्जन द्वितिय र आशा माया महर्जन तृतीय हुन सफल भएकी छिन् । त्यस्तै परम्परागत विधामा जडाउ कलातर्फ नरेन्द्र बज्राचार्य प्रथम, राजु बज्राचार्य द्वितिय र राम बज्राचार्य तृतीय भएका छन् । विजेताहरुलाइ क्रमशः ५०, ३०, र २० हजार नगद सहित पुरस्कृत गरिएको थियो । पुरस्कृतहरुको हस्तकला महासंघले नै खरिद गर्ने प्रतियोगिताका संयोजक राजमान बज्राचार्यले बताए ।
उक्त मेलाको समापन वाग्मती प्रदेशका मुख्य मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले गरेका थिए । मेलामा विभिन्न हस्तकला विधाका १ सय २० भन्दा बढी स्टल रहेका थिए ।
व्यवसायीहरुलाई करप्रति आकर्षित गर्न आग्रह
भक्तपुर : उद्योग वाणिज्य संघ भक्तपुरले उद्यमी व्यवसायीहरुलाई करप्रति त्रसित नभई आकर्षित गर्न आग्रह गरेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा हालै सरुवा भई आएका करप्रमुख तारा प्रसाद भुसाललाई स्वागत गर्दै संघले उक्त आग्रह गरेको हो । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष शिव प्रसाद मानन्धरले आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग मिलेर संघले करदाता जागरण कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
प्रमुख अधिकृत भुसालले कर शिक्षा सबैले पहुँचमा पुग्नेगरी कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्दै जाने विश्वास दिलाउँदै विगतमा झैँ आफ्नो कार्यकालमा पनि स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताए ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष मानन्धरले संघको प्रकाशन स्मारिका र किट ब्याग प्रमुख अधिकृत भुसाललाइ प्रदान गरेका थिए । संघको तर्फबाट बरिष्ठ उपाध्यक्ष रोशनी मैयाँ धौबन्जा, उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद प्रजापति, एसोसियट उपाध्यक्ष गणेशहरी प्रजापति, महासचिव दिनेश गोसाई लगायत उपस्थित थिए ।
कोषका अध्यक्ष भट्टराईको बिदाइ
काठमाडौं : नागरिक लगानी कोषले अध्यक्ष प्रा.डा रामचन्द्र भट्टराई र कोष सञ्चालक चन्द्रसिंह साउदलाई बिदाइ गरेको छ ।
कोषका अध्यक्ष डा.भट्टराईलाई २०७५ असोज २१ मा मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गरेको थियो । उमेर हदका कारण अर्थ मन्त्रालयको गत कात्तिक २८ को पत्रानुसार डा.भट्टराईको पदावधि समाप्त भएको हो ।
बिदाइ कार्यक्रममा डा.भट्टराईले बोर्ड र कार्यकारी निर्देशकबीचको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै आफूले ३७ महिनाको कार्यकालमा धेरै नै विषय सिक्न पाएको बताए । त्यसैगरी सञ्चालक साउदले आफ्नो कार्यकालमा गरेको सहयोगका लागि सबै सञ्चालकलाई धन्यवाद दिए ।
कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले कोषका अध्यक्ष र सञ्चालकले पुर्‍याएको सहयोगको प्रशंसा गर्दै संस्थाको कामलाई विधिसम्मत तरिकाले अघि बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
अन्धकारमुक्ति साकोसलाई उत्कृष्ट लघुवित्त सेवा सम्मान
रामपुर : पाल्पाको अन्धकारमुक्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था उत्कृष्ट लघुवित्त सेवा पुरस्कारबाट सम्मानित भएको छ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को ३४ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ ।
संघमा आबद्ध सदस्य संस्थाहरुमध्ये आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा आफ्ना सदस्यहरुलाई उत्कृष्ट लघुवित्त सेवा प्रदान गरेबापत नेफ्स्कुन साकोस लघुबित्त प्रशंसा पुरस्कार विधामा छनौट भई अन्धकारमुक्ति वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई संघको ३० औँ वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा प्रशंसा पत्रले सम्मान गरिएको हो ।
काठमाडौंको प्रज्ञा भवन कमलादीमा भएको कार्यक्रममा भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले अध्यक्ष सागरप्रसाद देवकोटालाई पत्र हस्तान्तरण गरे ।